काठमाडौं । रुपन्देहीमा रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले सरकारी मापदण्ड विपरित काम गरेपछि स्थानीयबासीले उद्योगविरुद्ध कारबाहीको माग गरेका छन् ।
विशेष गरी विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा वातावरण बिगारेको भन्दै स्थानीयले सिमेन्ट उद्योगमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको लगानी रहेको उद्योगले सरकारी निकायको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्दै आएको छ । यो खबर यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
पर्यटक आर्कषणको केन्द्र बिन्दूको रुपमा रहेको लुम्बिनीलाई प्रदूषित बनाउन सिमेन्ट उद्योगको विशेष भूमिका रहेको छ ।
भैरहवा आसपासमा स्थापना गरिएका उद्योगमध्ये धेरै जसो सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् । ती सिमेन्ट उद्योगमध्ये क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो उद्योगको रुपमा अर्घाखाँची सिमेन्ट रहेको छ । सो उद्योगले हाल दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ ।
मुरारका भने आफ्नो उद्योगले मात्रै नभई अरु उद्योगले समेत धूलो फालेको तर्क गरी गल्ती ढाकछोप गरिरहेका छन् । स्थानीयले भने सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुलोका कारण बाह्रै महिना रुघाखोकी लाग्ने, पशु चौपायाले आहारा नखाने, झोक्राउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
वातावरण विभागले भने अर्घाखाँची सिमेन्टले सरकारी आदेश अस्वीकार मात्रै होइन अटेर समेत गरेको जनाएको छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ३१, २०७५०८:१७
अब उपत्यकामा राति १० बजेसम्म सार्वजनिक यातायात गुड्ने
बिमस्टेक सम्मेलन : बुलेटप्रुफ र जामर भाडामा ल्याउन २ करोड, मोदी चढ्ने कार भारतबाटै ल्याइने
भीएलएनको ठगी : कम्पनी दर्तामै बदनियत, कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादनका लागि खडा भएको कम्पनी भिसा प्रोसेसिङमा
सडकभरि रूखैरूख राखेर कालोपत्रे गर्ने तयारी ! दुर्घटना भए कसको जिम्मेवारी ?
जनकपुरमा भारतकै लगानीमा मोदीको भव्य स्वागतको तयारी